ị bụ ebe a: Home Hair Care Change anya, Changing Lives ...
Change anya, Changing Lives ...
Nke a edozi isi a ga-kewapụrụ ìgwè mmadụ ahụ, a Ihọd, na Nwaanyị. African braids n'otu ntabi rejuvenate a afọ ole na ole. Ugbu a, ogologo na oké isi nke ntutu na-agakwaghị enwe a tụsiri.
e nwere otu, mgbe ihe na-amu amu-akpụ isi kwatara ntutu Perm kụrụ afọ n'ala ma ọ bụ chemistry. Ọ na-ese ihe ijuanya a, mildly, unpleasantly. Ọnọdụ a pụrụ ịzọpụta naanị afrokosichki. A nhọrọ edozi isi adịghị achọ kwa ụbọchị elekọta ma na ihicha. Oh ụmụ agbọghọ mara, otú ike ọ bụ dina ntutu n'ụtụtụ ma ọ gbagote na ihe ọhụrụ edozi isi (e.g., ịkpụ ntutu cascade).
Na mgbakwunye na nke niile dị n'elu, African braids ga-agbanwe agba nke ntutu gị na-enweghị dyeing. A dịgasị iche iche nke dị iche iche acha wuru emep uta eri adabara ndị kasị obi ike ndị na-egbuke egbuke shades, na jụụ a. Nwayọọ-aj u nwere ike alternated na eke ntutu agba, otú a na-eke na mmetụta nke dyeing ma ọ bụ agba?.
Na mgbakwunye na agba di iche iche, na e nwere ọtụtụ ụdị nke afropricheski. Ihe ọhụrụ pigtails bụ mgbakọ, "Live" (na n'ọnụ nke igbuasu bụ ọdụdụ), French mmetụta, wdg.
Nke a edozi isi na-ewe otutu oge. Na ya n'ụzọ ụfọdụ ibelata, braids weaves 2-3 wizard. Si àgwà nke muscle erughị ala, ke akpa usen nwere ike ịbụ a isi ọwụwa. Ndị na-esonụ ụbọchị, ihe nile ga-alaghachi ya kwesịrị ikwu. ndị mmadụ, arụsi ọrụ ike si ebi ndụ (ịgba egwú, egwuregwu), nwere ike ime ka iyatesịt n'ókè-ala ebe nke ihu na ntutu. Nke a adịghị nfụkasị. Subcutaneous cover isi dị nnọọ yitụbeghị yi dị otú ahụ ike ndọda, na oge mbụ emegharị arọ nke braids.
Na-asa a ọhụrụ edozi isi, ị nwere ike ọ dịghị ihe ọzọ ụbọchị ọ bụla. ma, afrokosichki mepụtakwara ka mfe ndụ (-agụ, otú ikpa isi African braids). Ya mere, shampooing oge ga-emetụta a izu afropricheske. Ndị isi ihe - ọ dị mma sachap remnants nke ncha ntutu, ma ọ ga-akpọnwụ, na isi amalite oko madly. Ọ bụrụ na nsogbu dị ka e nwere, nanị asa ntutu gị. Saa braids nnọọ ala na juu ogbo. Ọ dịghị mkpa ka ete ha, eji balms, ntụ oyi, rinses. Mgbe mmiri na usoro dị mkpa ka mmiri ntutu na a towel na akọrọ.
Mgbe oge ruru iwepu braids, mma ilegara Onye-nwe-. otú, usoro ga-ebe nnọọ ngwa ngwa na painlessly. Ọ bụrụ na nke a agaghị ekwe omume, ị pụrụ ime onwe gị untwisted. Hair mgbe niile kwesịrị ịbụ akọrọ. n'ihi na a mmalite, ị mkpa ịchọta a ebe pigtails, ebe njedebe nke aka ntutu, ... Na ibipu na sịntetik akụkụ. Mgbe ahụ, na-eji a ọdụ mbo iji wepụ ihe ndị fọdụrụ niile African eriri ikpa isi. Na-enweghị isiike mbo ka rachighaa ntutu ekpe. Atụla egwu nke ego nke ntutu ka rachighaa si. dị ka a na-achị, kwa ụbọchị, ọ bụla n'ime anyị dara banyere 100 volosinok. Na zapletennoj ntutu im
enweghị ebe ọ ga-aga, ha na-ada apụ ha bulbs, na-anọ na kwụ n'ahịrị. Ke ama okodorode nwụrụ anwụ ntutu braids-ada na ọnụ ọgụgụ buru ibu.
E nwere contraindications maka afrokosichek:
– seborrhea; – oké isi ọwụwa;
– abrasions, ọkọ;
Olee otú ikpa African braids?
Ụmụ nwanyị ịkpụ ntutu cascade
Atiya: Hair Care